गृहमन्त्री बाढीको अवलोकन गर्न गएका आफै फसे,यसरी एयर फोर्सद्वारा गरियो उनको उद्धार – Ap Nepal
August 5, 2021 343
मध्य प्रदेशका गृहमन्त्री नरोत्तम मिश्रा बुधबार दतियाको बाढी प्रभावित गाउँमा रेस्क्यू अपरेशनको अवलोकन गर्न पुगेका थिए । तर, उनी आफै फस्न पुगेका थिए । पछि एयरफोर्सको टोलीले उनलाई एयरलिफ्ट गरेर बाहिर निकालिएको थियो ।
नरोत्तम मिश्रा दतियामा एनआरडीएफ को मोटरबोटमा लाइफ ज्याकेट लगाएर बाढी प्रभावित कोटरा गाउँ पुगेको थिए । उनले एक घरमा केही मानिसहरु फसेको देखेपछि आफै छतमा चढे । एसआरडीएफले त्यहाँ फसेका सबैलाई सुरक्षित उद्धार गरे । तर, गृहमन्त्री आफै फसे ।
पानीको बहाव तीव्र भएका कारण मोटरबोट पनि त्यहाँ पुग्ने स्थिति बनेन । पछि एयरफोर्सको टोली पुगेर गृहमन्त्रीको उद्धार गरेको थियो । मन्त्रीभन्दा अघि चार जना स्थानीयहरुलाई उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा पु¥याइएको थियो ।
Prevआफ्ना श्रीमानको ७ वर्षपछि अनुहार देख्न पाएकी श्रीमतीको यस्तो प्रश्न सुनेर उनका श्रीमानले आँ:खाबाट आँ:शु झारे र भने …. (भिडियो सहित कुराकानी)
Nextयुवक कुट, पिटमा पक्राउ परेका जाजरकोटका वडाध्यक्षले के दिए यस्तो वयान ? (भिडियो सहित)